Levantine Art na Barranco de la Valltorta | Njem zuru oke
Levantine Art na Barranco de la Valltorta
El Barranco de la Valltorta ụlọ 21 uwe mkpuchi nke Levantine nka na bụ, ya mere, otu n'ime ebe ndị kasị mkpa mba n'ihe banyere oké nkume.
Ihe Nlereanya Levantine
Zigzag ahụ Barranco de la Valltorta n’agbata usoro Albocásser, Les Coves del Vinromà na Tírig, na-egosipụtakarị ụdị ala ọdịkarị site na nkume nzu na ahịhịa ahịhịa. Ma, karịa ihe niile, na-egosipụta ụdị ihe atụ ndị ahụ nke prehistoric art nke na-ekwu maka ndụ kwa ụbọchị, nkwenkwe akụkọ ifo na ọbụlagodi nchegbu ndị bi na ya n'oge ochie.
Kwadoro na agbụ ahụ eserese ime obodo nke kpuchiri facade Mediterranean, site na Pyrenees ruo Andalusia, ihe nnọchianya nke mgbago ugwu Castellón - ọkachasị, nke dị na mpaghara Valltorta-Gasulla, a na-ahụta dị ka isi ihe iji ghọta ụzọ ndụ nke afọ ndị ahụ dị anya. Nke a bụ mkpa ọ dị na UNESCO tụlere enclaves, ebe a na-achọta eserese, World Heritage Site na 1998.
El Nkume Nkume nke Valencian Community ụlọ 27 iche iche, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nke Levantine nka, ebe isiokwu ndị a ma ama metụtara ịchụ nta na ikpokọta ihe nkiri, na ihe nnọchianya nke anụmanụ na ndị mmadụ kachasị. Ndị na-agba ụta na anụ ọhịa, mgbada, ele na ịnyịnya, ụmụ nwoke na-agba egwu na ịchụ nta, na-ekere òkè n'olulu ndagwurugwu ahụ iji gosipụta akụkọ ihe mere eme nke akụkọ ihe mere eme tupu anya ndị na-ekiri ugbu a.
Ka ọ dị ugbu a, ọ na-elekọta nlekọta, ọmụmụ na ndozi nke ihe nketa a dị egwu, Valltorta Museum. Ọ dị na Tírig ma na-enye njem nlegharị anya nke na-enye ohere ka ị ghọtakwuo ọnọdụ na akara nke eserese. Ọ na-emeghe ụbọchị ọ bụla n'afọ, ma e wezụga Mọnde na Tuesday, ma na-ahazi ọpụpụ gaa n'ọgba niile na ebe obibi nke mejupụtara usoro nke Valltorta-Gasulla. Agbanyeghị, iji kwado nzukọ nke ihe ndị a, a na-atụ aro ịkpọtụrụ ebe a na-edebe ihe ngosi tupu oge eruo.
Foto na ozi ndị ọzọ na: gva.es
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Levantine Art na Barranco de la Valltorta
Ihe 0 kwuru, hapụ nke gị
Otu esi amata Brazil na ụbọchị 15 (I)
Ecotourism na Australia